Man City Oo Dardartay Chelsea Xili 18 Dhibcood Oo Nadiif Ah Ay Ku Qabteen Liijaanka EPL %
Manchester City ayaa waxay dheereystay dhibcaha ay ku hogaamineyso horyaalka Premier League, kadib markii ay Etihad Stadium ay ku dubteen difaacadayaasha horyaalka koowaad ee aduunka ugu xiisaha badan.
Labadda kooxood ayaa soo bandhigay qeybta koowaad ee kulankaan kubad qurux badan oo loo riyaaqay, waxayna ahaayeen kuwa wiilashooda ay abaabuleen inta ay ciyaartu socotay fursado badan oo goolal ah.
Bogga hore ee kulanka ayaa wuxuu kusoo dhamaaday bareejo goolal la’aan ah, waxaana ay aadeen qeybta nasiinada iyagoona soo sameeyay wada tashiyo badan, si ay Natiijada kulanka ay uqaataan.
Markii dib leyskugu soo laabtay ciyaarta, Sky Blues ayaa waxay dhalisay goolkeedii ugu horeeyay ee kulanka, waxaana ay ka heshay ciyaaryahanka lagu magacaabbo Bernard Silva wuxuuna dhaliyay daqiiqadii 46aad ee qeybta koowaad.
Kadib goolkaas kooxda macalin Antonio Conte ee Chelsea ayaa waxay xusul duub ay ugashay sidii ay goolkaas isaga soo gudi lahayd, iyadoona abaabushay weeraro badan, kuwaasoo goolal inta badan noqon karin.
Wax walba ay sameeyaan, ma aysan soo bareejeen ciyaarta Blues, wuxuuna kulanka kusoo dhamaaday aakhiritaankii 1-0, oo loogu awood sheegtay kooxdii sanad ciyaareedkii lasoo dhaafay ku guuleystay Premier League.
Natiijada ayaa waxay uga dhigan tahay kooxda Sky Blues, inay hada ku qabaneyso hogaanka Premier League 78 dhibcood, waxayna ka sareysaa Liverpool oo labaad fadhisa 18 Buundo, xili naadiga Reds lagu naaneyso ay leedahay 60 dhibcood.
Man City vs ChelseaPremier League